Sunday October 02, 2016 - 19:53:08 in Wararka by
Shaley barqadii ayay socdaal shaqo ku dhex martay jidka dheer ee Grønland, iyada oo sheegtay in xili habeen mugdi ah aysan nafteeda ku aaminteen inay Grønland soo marto. Socdaalkeeda shaqo waxaa ku weheliyay gudoomiyaha gudiga degmada magaalada OsloRaymond Johansen. Reymondoo ka tirsan xisbiga APayaa sheegay inuusan qabin fikirka Listhaug, uuna wax dhibaato ah oo la sheegi karo uusan ku arkin xaafada Grønland. Hadii ay jiraan cid qabto cabsi xaga amniga ah ka qabto halkan, waa booliska shaqadiisa ayuu Reymond hadalkiisa raaciyay.
Listhaugayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan afartameeyo(40)dhalinyaro soomaali ah oo si weyn uga qeybqaato falal danbiyeedyada ka dhaca xaafada Grønland. Dhalinyaradan oo ka kooban labaatameeyo U.K u guuray bilowgii sanadkii 2000, hadana wadanka dib ugu soo noqdey, iyo labaatameeyo kale oo ay iyagu soo xero galiyeen. Dhalinyaradan U.K kasoo guuray ayay Listhaug sheegtay inay la yimaadeen dhaqamo cusub oo kriminalitet ah iyo falal danbiyeedyo adag oo ka duwan kuwii horey loogu yaqaanay inay xaafada ka dhacaan. Listhaug ayaa hadalkeeda raacisay inay il gaar ah ku hayaan afartankaas dhalinyarada soomaalida ah, ayna rabaan inay tiradooda dhimaan, mid kastana si gaar ah ula tacaamuli doonaan.
Silviayaa sheegtay in dowlada, booliska iyo waliba Oslo-kommune ay arintan iska kaashan doonaan. Sidoo kale waxay hadalkeeda raacisay in muhiimada ay tahay in xaalka xaafada Grønland uusan noqon sida xaafado kuyaalo magaalooyinka wadanka Sweden qaarkood.
Taa badalkeeda waxay soomaalidu doorteen oo codkeeda ku aamineen labo siyaasi oo xubno ka ah golaha deegaanka ee Oslo. U jeedada guud ee loo doortay waxay ahayd inay dadka codkooda siiyay ee soomaaliyeed aydareenkooda gaarsiiyaan golayaasha ay xubnaha ka yihiin.
«Ninkaad waxaraha ku aamini weydo, geel raacso oo ku aamin.»